Ihlabathi likaMatshi ngoxolo noNgcoliseko - iMatshi ngoMatshi
ILatin American Matshi
I-2nd world MARCH igqibile
Isivumelwano sothintelo lwezixhobo zenyukliya sele siqalisile ukusebenzainfo
IReferendum yaseYurophu kwiMfazwe yaseUkraine yiYurophuNgoxolo+info
I-2 yeHlabathi Matshi yoXolo kunye neNoViolence
Ukusuka kwi-2 OCTOBER 2019 TO MARCH 8 2020
NGABE UFUNA UKUQHUTYELWA?
Xela imeko yehlabathi enobungozi ngengxabano ekhulayo, qhubeka ukhulisa ulwazi, wenze amanyathelo afanelekileyo abonakale, anike ilizwi kwizizukulwana ezitsha ezifuna ukufaka inkcubeko ye-nonviolence.
Ngemvelaphi ye-1º ye-World March 2009-2010, ukuba ngeentsuku ze-93 zahamba ngamazwe e-97 nakwiizwekazi ezihlanu. Le 2ª World March for Peace and Nonviolence ngexesha le-2019 kunye ne-2020 iminyaka icetywayo.
I-2ªMM iya kuqala eMadrid ngomhla we-2 ka-Oktobha we-2019, Usuku lwaMazwe ngamazwe loNgcoliseko. Kuya kushiya kwicandelo lase-Afrika, iMelika, i-Oceania, i-Asia, ukufika eMadrid kwi-8 ka-Matshi ka-2020, Usuku lwaMaZwe wamazwe ngamazwe.
Iindaba eziNje zoMatshi
Amazwe angama-65 ngesibhengezo se-TPNW
Isixeko esigqityiweyo ngomhla wesi-3 kuMatshi
I-referendum yemfazwe yaseUkraine
Ukuxabisa imbono yehlabathi yabantu bomthonyama
I-Humahuaca: Imbali yeMural
I-MSGySV Panama kunye neLatin American Matshi
I-2ª MM yaqala eMadrid 2 Oktobha ka-2019, Usuku lwaMazwe ngamazwe loNgcoliseko, iminyaka elishumi emva kwe1ª MM.
Ngaba ufuna ukusebenzisana nathi?
Umcebisi ityelelo le-Matshi
Ikhosi yoohambo idinga abaxhasi bokufikelela kubaphulaphuli abaninzi kunye nokuthatha inxaxheba.
Xhuma kwiintanethi zentlalo
Ziza kuvela ngezenzo kunye neeprojekthi ezivela kwisiseko sentlalo.
Iindawo ezibanzi kunye neentlobo ezahlukeneyo zokuthatha inxaxheba kunamaqela okukhuthaza
Ulungelelaniso lwaMazwe ngamazwe
Ukulungelelanisa amanyathelo, ikhalenda kunye nemizila
Ulwazi oluthile ngathi
Ngomhla wokuqala we-1 ye-Matshi ka-2009-2010, ethe yahamba iintsuku ezingama-93 kumazwe angama-97 nakumazwekazi amahlanu. Ngamava aqokelelweyo kunye nokubala kwizalathi ezaneleyo zokuba nenxaxheba enkulu ngakumbi, inkxaso kunye nentsebenziswano ... Kucwangcisiwe ukwenza lo Mhla we-2 ku-Matshi woXolo kunye noNgcoliseko 2019-2020.
Bika imeko yehlabathi eliyingozi ngokunyuka kweengxabano
Qhubeka udala ulwazi lokuba kuphela "uxolo" kunye "nokungabi nonyanzelo"
Ukwenza ukuba kubonakale izenzo ezahlukeneyo ezihlukeneyo ezihlukeneyo abantu, abaqokelelwane kunye nezizwe eziphuhliswayo kwiindawo ezininzi kwiindlela zokusebenzisa amalungelo oluntu.
Ukunika ilizwi kwizizukulwana ezitsha ezifuna ukuthatha kunye nokushiya uphawu
© 2022 Phuhliswa ngu 4P Ukuthengisa